Shumacyada Hadiyado Dhiirrigelin Xaraashka Macaamiisha Wax Soosaarka Qurxinta leh iyo soosaarayaasha | Winby
shumac hadiyad dhigay
Imaanshaha cusub muraayad matte muraayad udgoon hadiyad shumac dhigay
Shumacyada udugga waxay ka sameysan yihiin saliidaha lagama maarmaanka ah iyo waxsoosaarka soybean, kaasoo gebi ahaanba sii deyn kara carafta iyadoo aan lahayn haraaga xun. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo culeyska fekerka, hagaajinta tayada hurdada, iyo nadiifinta hawada gudaha.
Shumacyo qurxoon oo qurxoon ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qurxinta guriga. Shumacyadan udgoon ayaa hadiyado cajiiba u ah qoyskaaga iyo asxaabtaada ama xitaa naftaada. Waxay noqon kartaa hadiyado dhalasho, hadiyado kirismas ah, hadiyado Maalinta Jacaylka, hadiyado qurxinta guriga, hadiyado baahiyaha guryaha.
Shumacan udugga ah waxaa lagu waafajiyay hadiyad qaas ah. Isla mar ahaantaana, daboolka hagaha shumaca muraayadda wuxuu isticmaalaa dabool bir ah oo tayo sare leh, kaas oo si weyn u kordhiya naqshadeynta sheygan. Sanduuqa.
Magaca badeecada Daasadaha birta ah
Cabir D7cm * H4.9cm
Waxyaabaha qalab tayo sare leh
Dabool Daboolka birta
Midab Qaabab kala duwan iyo midabbo
waxaan u isticmaalnaa in ka badan 100 nooc oo ah carafyada la xushay ee shumaca. Alaab keenayaasheena udgoonku waa CPL aromas iyo Firmenich. Dhammaantood waa kuwa ugu sarreeya noocyada alaab-qeybiyeyaasha udgoon ee adduunka. Udugyadan waxaa lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo udugga iyo sidoo kale saliidaha lagama maarmaanka ah, waxayna kaa caawin doonaan inaad abuurto jawi raaxo leh. Wixii udgoon, waxaan kuu soo bandhigi karnaa ur kala duwan sida aad jeceshahay. Haddii aad jeceshahay ur xoog leh, waxaad dooran kartaa 10% saliid shumaca; hadaad jeceshahay ur jilicsan, waxaad dooran kartaa 5% saliid shumaca.
Hore: Qasacadaha 4OZ ee daasadaha birta ah ee lagu sameeyo shumaca
Xiga: Ku iibinta kulul dhalooyinka shumaca dhalaalaya ee qabow leh daboolka